Min Thuta, Author at - Page2of 73
Stayhome ကာလမှာ သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေမယ့် RPG Game အချို့
Stayhome ကာလမှာ လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ပြီးသွားရင် အရင်ချိန်တွေကလို သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အပြင်သွားပြီး အလည်အပတ်တွေ လုပ်လို့မရသေးပါဘူး။ ဒီတော့ အိမ်ထဲမှာပဲ TV ကြည့်တာတွေ၊ စာဖတ်တာတွေ၊ မုန့်စားတာတွေနဲ့ ဂိမ်းကစားနေတာတွေပဲ လုပ်လို့ ရမှာပါ။ ဒီအချက်တွေထဲမှာမှ ဂိမ်းကစားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Android ဖုန်းတွေမှာ ကစားနိုင်မယ့် Classic ဆန်ဆန် RPG Game ကောင်းတချို့ကို
Content တစ်ပုဒ်အတွက် လုံးဝသတိထားသင့်တဲ့ အချက် (၄) ချက်
Social Media မှာအောင်မြင်မဲ့သော့ချက်ဟာ Audience တွေကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်း အရာတွေကိုရေး သားဆွဲဆောင်ဖို့ပါ။ Content
ကမ္ဘာကျော် နာမည်ကြီး Brand တွေ Chatbot ကိုဘလို သုံးကြလဲ?
ပထမဆုံးဖော်ပြချင်တာကတော့ Starbucks ပါ။ Starbucksဟာဆိုရင် နှစ်သက်ရာ
Posted by Min Thuta/ အောက်တိုဘာ 11, 2020/ Blog/0Comment
Stayhome ကာလမှာ Photo Collage လုပ်ကြမယ်
Collage Maker ဆိုတဲ့ App မှာတော့ များပြားလွန်းတဲ့ Collage Layout တွေနဲ့ စိတ်တိုင်းကျ Photo Collage လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Collage လုပ်ရုံတင်မဟုတ်ပဲ
Posted by Min Thuta/ အောက်တိုဘာ 10, 2020/ Blog/0Comment
Stay home မှာ Business English Skill ကိုတက်စေမဲ့နည်းလမ်းငါးသွယ်
လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပက်သက်တဲ့ Vocabulary (ဝေါဟာရ) တွေကိုအရင်ဆုံးကြွယ်ဝအောင် လုပ်ပါ။Vocabulary
Gmail ပို့သူတွေရဲ့ IP နဲ့ Location ကိုဘလိုကြည့်မလဲ?
ကဲ Gmail အကောင့်တစ်ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ နယ်ပယ်တွေက ပို့တဲ့ Mail တွေရှိမယ်၊ ကြော်ငြာတဲ့ Mail တွေရှိမယ်…အစရှိတဲ့ Mail တွေကို ကိုယ်က သူတို့ဘယ်နေရာတွေကနေ ပို့နေတာလဲဆိုတဲ့ သိချင်စိတ်တွေ တခါတလေမှာ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုကိုယ့်ကိုပို့နေတဲ့ Mail တွေက ဘယ်ကပို့နေတာလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုသွားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ဝေမျှလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
သင့် Computer ရဲ့
Posted by Min Thuta/ အောက်တိုဘာ 7, 2020/ Blog/0Comment
Twitter မှာ Business Run ဖို့ဘာတွေသိသင့်လဲ
Social Media Network တွေထဲမှာတော့ Twitter က Social ပိုကျတဲ့ Network တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Social Media Network တွေပေါ်မှာ Image နဲ့ Video တွေကို Like, Share, Tag Account, Live လွှင့်တာတွေကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Twitter ကကျတော့ Engagement ကို
2020 အကောင်းဆုံး Voice Changer App များ
Stayhome ကာလမှာ Screen Time အရမ်းများနေရင်ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့လျှော့ချမယ်
အရေးကြီးတဲ့ Chat notification ဒါမှမဟုတ် Email
SMART Marketing Objective ဆိုတာဘာလဲ?
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကျင့်သုံးလေ့ရှိကြတဲ့ SMART Marketing Objective ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဘာပဲလုပ်လုပ် Timing ကအရေးကြီးပါတယ်။ Deadline တွေကိုအတိအကျ သတ်မှတ်ထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကတော့ SMART Marketing Objective ကို
Posted by Min Thuta/ အောက်တိုဘာ 3, 2020/ Blog/0Comment